युगसम्बाद साप्ताहिक - कुराले मात्रै देश विकास हुने भए...
Friday, 02.21.2020, 10:58am (GMT+5.5) Home Contact
कुराले मात्रै देश विकास हुने भए...
Tuesday, 08.28.2018, 01:18pm (GMT+5.5)
सरकार दुई तिहाइको छ, गति सुस्त छ । यो सरकारले मान्छेको लिङ्ग परिवर्तन बाहेक सबै गर्नसक्छ भनेर भनिएको थियो र गरेको पनि छ । हुने नहुने कानुनहरु बनाएर सबैलाई कस्न थालेको छ । कस्ने कुरा त ठिकै थियो, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था र कानुनीराज स्थापित गर्न समयसापेक्ष कानुनहरु चाहिन्छ, तर अहिले भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी ऐनमा व्यापक बिरोध भैरहेको छ । यसमा कसको के स्वार्थ छ त्यो उनीहरुले नै जान्ने हुन् । तर, सरकारको गतिका विषयमा भने अहिले सबैमा निराशा मात्र छ । चाहना हुँदैमा काम हुँदैन र काम गर्नेले सपना मात्रै बाँड्दैन । आज प्रत्येक जसोको मुखबाट सरकार राम्रो भएन भनेको सुनिन्छ । तर राम्रो मान्छे सरकामा पठाए पो राम्रो काम हुन्छ भन्नेतर्फ भने ध्यान दिएको पाइँदैन । पार्टीबाट चुनिने सबै मान्छे राम्रा मात्र हुँदैनन् । विभिन्न स्वार्थ वा कारणले त्यहाँ नराम्रा मान्छेले बढी मात्रामा प्रवेश पाएका हुन्छन् । राजनीतिक पार्टीबिना राजनीति हुँदैन भन्ने सोचाईले गर्दा बिडिङ्गो परेको छ । त्यसैकारणले पंचायत फालियो । के पंचायतमा राजनीति थिएन ? पंचायतमा जेजति प्रधानमन्त्री, मन्त्री या सांसद भए ती सबै पार्टीकै त थिए नि, बाहिरबाट ल्याइएका त थिएनन् । त्यो बेला त हो विकास निर्माणको जग बसेको । त्यो बेला जेजत काम भएको थियो, देश आज पनि त्यसैमा अडिएको छ । तिनै र त्यस्तै नेता आज पनि सरकारमा छन्, तर आज किन यो अराजकता र भाँडभैलो ? आधारभूत रुपमा सोच्नुपर्ने कुरा हो यो । आज तिनैले किन बहुराष्ट्र माग्दैछन् ? यो सबै संघीयताकै दुष्परिणाम हो ।
पार्टीमा लागेपछि जे गरे पनि र जसो गरे पनि पार्टीले ढाकछोप गर्ने परिपाटी बसेकाले अपराध प्रवृत्तिका मान्छे समेत पार्टीमा पसाएर पार्टीहरू नै त्यस्तैका झुण्ड भैसकेका छन् र पार्टी पनि च्याउ उम्रेसरी भएका छन् । विगतमा समानुपातिक नामको अप्रजातान्त्रिक दैलोबाट एक दुई सिट भेट्टाउने पनि भटाभट मन्त्री भएको देखेपछि त झन् के चाहियो ? जता लाग्दा खान पाइन्छ त्यतै दगुर्ने होडवाजीमै पार्टीहरू बन्ने, फुट्ने, जुट्ने क्रम तीब्र भएको थियो । एउटा कुनै पार्टीको सरकारले राम्रै काम गरे पनि अर्कोले बिरोध गर्नैपर्ने संस्कारले गर्दा अस्थिरता बढ्दो छ । अहिले दुई तिहाईको सरकारको पनि बिरोध नै छ । अझ सरकारका कतिपय गतिविधि र सरकार पक्षधरहरुको अभिव्यक्तिले आक्रोश बढाइरहेको छ ।
बिरोध गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो रे ! के त्यस्तो बिरोधको तुक हुनु पर्दैन ? आज जसलाई लोकतन्त्र भनिंदैछ त्यो केही स्वाँठ नेता, धनाढ्य व्यापारी, भ्रष्टाचारी र कालाबजारियाका लागि स्वर्र्ग भएको छ, तिनीहरूकै विलासिताको बस्तुमात्रै भएको छ । गरीब जनताको प्रतिनिधित्व गर्छौं भन्ने नेताहरू स्वयं शोषक, तानाशाह बनेका छन् अर्थात् नेताले नै आफूलाई त्यस्तै रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । नेता र जनताको सम्बन्ध स्वाभाविक रुपमा प्रजातान्त्रिक हुन नसकेको अवस्था हो यो । यो कमजोरी नेताको हो । जनभावना नबुझी आफ्नै मनमाफिक र त्यो पनि अरुकै इशारामा नाचेपछि कसरी राम्रो स्थिति बस्छ ? उपद्रो मच्चाउन मात्रै जानेहरूको बुद्धि नफिर्ने हो भने भविष्य अझ कष्टमय हुनु निश्चित छ । यिनीहरू राजनीति जनताको सुखसुविधाका लागि नभएर आफ्नै समृद्धिका लागि गरिरहेका छन् ।
जनता आज मुख्यतः अभाव, असुरक्षा, भ्रष्टाचार र कालोबजारीबाट मुक्ति चाहिरहेका छन् । जनताका पीरमर्का हटाउनु सभ्य सरकारको कर्तव्य नै हो । तर, त्यो मुक्ति उखान टुक्का जोडेर चुट्किलो सुनाएर (जस्तो प्रधानमन्त्री आलीले गरिरहनुभएको छ) सम्भव हुने कुरा होइन । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका नाममा कुनै पनि संस्थालाई यहाँ कानुन, नियम अनुसार चल्न दिइएको छैन, न त नेता आफैं नियममा चलेका छन् । शिक्षकलाई त भरिया बनाएकै थिए, निजामती कर्मचारीलाई झोला बोकाउन बाध्य पारिरहेका छन् । हरेक सरुवा–बढुवामा नेताका ढोका चाहार्न विवश छन् । योग्यता, क्षमताको कुनै कदर छैन । हुकुमी शासन छ ।
यथार्थ भन्ने हो भने देशमा निरंकुश तानाशाही शासन यहाँ बाह्र–पन्ध्र वर्षदेखि चल्दैआएको छ । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता राष्ट्रिय महत्वका प्रश्नमा जनमत नलिइनु जनताले मान्दैनन् भनेर होइन ? जनताको अभिमत नलिनु जनता र प्रजातन्त्रकै अपमान होइन ? यो सरासर मिचाहा प्रवृत्ति हो । निजी स्वार्थका लागि जेसुकै गर्न गराउन अघिसर्ने गिरिजा र प्रचण्डले गर्दा आज देशले यो दुर्गति व्यहोर्नुपरेको यथार्थ अझ स्पष्ट भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नेको त यहाँ अनिकालै परेजस्तो छ । राष्ट्रपति बनाइदिन्छु भनेर प्रचण्डले गिरिजालाई उल्क्याएपछि नै संकट सुरु भएको हो । यी दुबैले राजनीतिलाई बिनालगानीको नाफै नाफाका व्यापार बनाएर देश डुबाए । यिनीहरुका पालामा पदको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार पनि हुनसम्म भयो । लोकतन्त्र भनेर लोकतन्त्रलाई नै तल्लोस्तरमा पु¥याइदिए । नेपालको लोकतन्त्र दुनियाँका नजरमा ‘तमासा’ हुनगयो । अस्थिरताले स्थायी रुप लियो– यही होइन उपलब्धि ?
आज जनता महंगी, अभाव र कालोबजारीको मारमा छन् । जनतालाई त नेताले भ¥याङ मात्रै बनाए । यी भीडका नेता रहेछन् । भीडको कुनै दायित्व नहुने रहेछ । जनताप्रतिको दायित्व यहाँ न सरकारले लिएको छ, न त कुनै दलले । दूध आउन्जेल दुहेर खाने, तर घाँस–कुँडो–दाना केही दिन नपर्ने गाई जस्तो बनाएका छन् यिनले जनतालाई र प्रजातन्त्रलाई पनि । संचार माध्यम र बुद्धिजीवी समेत नेता र मन्त्रीकै पछि दगुरिरहेछन्, सम्भवतः त्यसै भएर होला चाणक्यले पनि ‘खराब राज्यभन्दा त राज्य नै नहुनु बेश’ भनेछन्– ‘वरम् न राज्यम् न कुराज–राज्यम्’ भनेर । आजका राजनीतिबाजहरु जनतालाई उल्लु बनाउँछौं भन्दा आफैं उल्लु भएको थाहा पाइरहेका छैनन् । कोही पनि आज आफ्नो पद अनुसारको आचरणमा छैन भन्नुपर्दा दुःख लागे पनि यथार्थ नै हो ।